ZTE Blade X1 5G waxaa lagu soo bandhigayaa Snapdragon 765G iyo Android 10 oo ka baxsan sanduuqa | Androidsis
ZTE Blade X1 5G waxaa lagu soo bandhigayaa Snapdragon 765G iyo Android 10 sanduuqa
Soo saaraha Aasiya ee ZTE ayaa soo saaray qalab cusub oo imanaya Maraykanka iyada oo la tixgelinayo Visible, oo ah hawl wade ka tirsan shabakadda Verizon. Qaabka la sii daayay waa ZTE Blade X1 5G, taleefan casri ah oo noqon doona ikhtiyaari ugu yaraan xiiso u leh faa'iidooyinkiisa iyo qiimaha ugu dambeeya.
ZTE Blade X1 5G waxay aad ugu egtahay xarunta Blade 20 Pro 5G, markan moduleka ugu weyni waa liitaa, laakiin wuxuu balan qaadayaa muraayadaha indhaha dambe. Intaa waxaa dheer, naqshadeynta waxay aad ugu egtahay taleefoonada kale ee shirkadda ee ilaaliya waxa shaqeeya waxayna tani umuuqataa inay sifiican usameynayso.
1 ZTE Blade X1 5G, dhexdhexaad aad u tiro badan
2 Batari ku filan maalinba maalinta ka dambeysa
ZTE Blade X1 5G, dhexdhexaad aad u tiro badan
Qalabkan cusub ZTE wuxuu ku dhejiyaa shaashadda 6,5-inch IPS LCD Xalka buuxa ee HD +, saamiga waa 19: 9 ilaalintiisuna waa Gorilla Glass. Qaabdhismeedka ayaa si dirqi ah ku leh jajab xagga hore ah, in kasta oo uu haysto wax ku filan oo ka dhigi kara mid la jejebiyey marka laga reebo geesaha
El ZTE Blade X1 5G wuxuu ku shaqeeyaa processor-ka caanka ah Snapdragon 765G laga bilaabo Qualcomm, oo ku filan in la ciyaaro marka la qalabeeyo qalabka wax lagu sawiro ee 'Adreno 620. Xawaaraha inta jeer ee soo noqnoqda waa 2,4 GHz, RAM-ka waa 6 GB oo keydkiisuna waa 128 GB iyadoo ay suuragal tahay in la ballaariyo illaa 2 TB.
ZTE Blade X1 5G xaga dambe waxaa lagu qalabeeyaa ilaa afar dareemayaal, midka ugu weyni waa 48 MP, kan labaadna waa 8 MP xagal ballaadhan, kan saddexaadna waa 2 MP macro kan afraadna waa 2 MP. Horeba xagga hore waxaad ku arki kartaa dalool leh 16 megapixel sensor, oo ku filan waqtiyada hadda.
Batari ku filan maalinba maalinta ka dambeysa
Batariga lagu daray waa 4.000 Mah, soo saaraha ayaa sheegay in iyada ay ku siin doonto nolol waxtar leh oo ka badan saacadaha 18 ee isticmaalka joogtada ah ee shabakadda 4G. Moodooyin badan oo ka mid ah boosteejooyinka ayaa hadda qalabeeya batariyada 5.000 Mah, waxay awood u leeyihiin inay ku siiyaan madax-bannaanid aad u badan waqti gaaban iyo waqti dheer.
ZTE Blade X1 5G ayaa ku soo dallacaya Quick Charge 3.0, mid kasta oo ka mid ah culeysyadu waxay socon doonaan wax ka yar 50 daqiiqo waxayna gaari doontaa 18W xawaare. Telefoonkani wuxuu u heellan yahay nidaamka lacag-bixinta ee caanka ah ee loo yaqaan 'Qualcomm' qaybtiisa saddexaad.
Qodobka cajiibka ah ee qaabkani waa inuu ku shaqeeyo 4G / LTE iyo 5G band, modemku wuxuu siin doonaa xawaare muhiim ah waxayna noqoneysaa mid ka mid ah dhowr waxyaabood oo wanaagsan. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay Bluetooth 5.1, Wi-Fi, minijack oo loogu talagalay dhagaha, GPS iyo akhristaha faraha ayaa ku yaal dhabarka.
Software-ka ka imanaya warshadu waa Android 10, wuxuu ballan qaadayaa cusbooneysiinta soo socota ee Android ee ku imaan doonta OTA, dib loo soo dejin karo rubucii labaad ee sanadka. Lakabku waa is-dhexgalka uu ZTE u adeegsado dhammaan noocyadiisa, isagoo daahir ah oo la socda codsiyada shirkadda horay loo rakibay.
ZTE BADBAADO X1 5G
MUUQAAL 6.5-inji IPS LCD leh HD + xal buuxa (2340 x 1080 pixels) / Qiyaasta: 19: 9 / Gorilla Glass
PRORESOR Qualcomm Snapdragon 765G
KAADHKA CARRUURTA Adreno 620
Kaydinta Gudaha 128GB / Taageerada MicroSD ilaa 2TB
KAAMARKA DAR 48 MP Sensor Main / 8 MP Sensor Angle Wide / 2 MP Macro Sensor / 2 MP Sensor Qoto dheer
NIDAAMKA HAWLGALKA Android 10
BATARY 4.000 mAh oo leh Lacag Deg Deg ah 3.0
Isku xirnaanta 5G / Wi-Fi / Bluetooth 5.1 / Minijack / GPS
Qiyaasaha iyo Miisaanka 164 x 76 x 9.2 mm mm / 190 garaam
Hawlwadeenka muuqda ee Mareykanka ayaa iibin doona ZTE Blade X1 5G hal ikhtiyaar oo midab ah, saqda dhexe buluug iyo soosaaruhu waxay xaqiijinayaan inuu hadhow midab yeelan doono. Qiimuhu waa 384 doolar, taas oo isbeddelkeedu yahay 315 euro. Waqtigaan la joogo lama oga in ay imaaneyso iyo inkale Mareykanka dibadiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » ZTE Blade X1 5G waxaa lagu soo bandhigayaa Snapdragon 765G iyo Android 10 sanduuqa
Google Lens on Android wuxuu hadda turjumi karaa qoraalka qad la'aan